सुशान्तको निधनको खबर सुनेर ५ वर्षका भान्जाले यसो भनेपछि सबैको बोली बन्द ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्तको निधनको खबर सुनेर ५ वर्षका भान्जाले यसो भनेपछि सबैको बोली बन्द !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको खबरले अहिले बलिउड गहिरो शोकमा छ । सुशान्तको निधनको खबरले उनका ५ वर्षका भान्जाले देखाएको प्रतिक्रिया यतिबेला भाइरल बनिरहेको छ । सुशान्तकी बहिनी श्वेता सिंह किर्तिले आफ्ना छोराको प्रतिक्रिया सामाजिक संजालमा सेयर गरुेपछि अहिले उक्त भिडियो भाइरल बनिरहेको छ ।
लामो समयदेखि डिप्रेसनसँग जुधिरहेका सुशान्तको निधनको खबर जब कृतिले आफ्ना छोरालाई सुनाइन् त्यसको लगत्तै अमेरिकामा बस्ने उनका ५ वर्षका भान्जा निर्वाणले आफ्नी आमालाई भने ‘तर उहाँ तपाइाको मनमा जीवित हुनुहुन्छ । उनले यो वाक्य पटक पटक भनेका थिए ।